Momba anay - Beijing Topsky Intelligent Equipment Group Co., Ltd.
BeijingTopsky Intelligent Equipment Group Co., Ltd. dia niorina tamin'ny taona 2003, tapa-kevitra ny ho lasa orinasa fiarovana & fiarovana manerantany nalaza R & D. Ny foibe dia ao amin'ny Zhongguancun Hightech Park, toby indostrialy Jinqiao, hita 3, 000 metatra toradroa.
Ny renivohitra voasoratra dia 42 tapitrisa RMB. Manana sampana telo izahay: TOPSKY, TBD, KYCJ sns, dia orinasa teknolojia avo lenta.
Fitaovana mpamono afo, ao anatin'izany ny roboka afo, ny rafitry ny zavona, ny fitaovana elektrika, ny mpamantatra ny fiainana sns
Fitaovana polisy sy miaramila anisan'izany ny akanjo EOD, manuipulator teleskopika. Robot EOD, akaikin'ny fandidiana mangina sns.
Detector gazy ao anatin'izany ny mpamantatra ny fivoahan'ny lasantsy methane laser, detector gazy iray, detector 2 amin'ny 1, detector gazy 4 amin'ny 1 sns.
Ny zava-boahary na zava-maniry voajanahary azo antoka azo antoka, ao anatin'izany ny fakantsary nomerika azo antoka azo antoka, metatra haavo nomerika azo antoka azo antoka, metatra lavitra laser azo antoka ary sns.
Amin'ny fitaovana famonoana afo, fitaovana famonjena, fikarohana amin'ny fiainana ary fitaovam-piadiana polisy & militeraly, manana tombony miavaka ny orinasanay.
Amin'ny fanaraha-maso ny fiarovana sy ny fitaovana fampiharana ny lalàna, iray amin'ireo mpamokatra lehibe indrindra izahay.
Amin'izao fotoana izao, ny vokatray dia efa naondrana tany amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 20 toa an'i Amerika, France, Australia, Italia sns.
Hatramin'izao, ny orinasanay dia
17 Fanamarihana momba ny kalitaon'ny fanaraha-maso kalitao sy fanaraha-maso kalitao nasionaly
Famaritana fanamarinana ny fiarovana ny toeram-pitrandrahana 103
9 Porofon'ny fipoahana simika
Fanamarinana 6 CE
Mari-pankasitrahana 45 patanty
Topsky dia manohy mandefa vokatra vaovao amin'ny hafainganam-pandeha 30% isan-taona. Ny orinasanay dia manolotra vidiny mirary, fandefasana haingana ary serivisy aftersales tsara ho iraka ho antsika. Manantena tokoa izahay fa hiara-hiasa amin'ireo mpanjifa marobe avy amin'izao tontolo izao mifototra amin'ny fitoviana sy ny tombotsoan'ny tsirairay.
Tamin'ny volana Jona 2003
Beijing Topsky dia natsangana niaraka tamin'ny renivohitra 42 tapitrisa RMB voasoratra anarana sy ny adiresy ao amin'ny Distrikan'i Haidian, Beijing.
Tamin'ny Novambra 2004
Nifindra tany amin'ny tranobarotra ara-barotra ao amin'ny Distrikan'i Haidian izahay manana 100 metatra toradroa mahery
Tamin'ny Desambra 2005
Ny orinasanay dia nanomboka nifindra avy amin'ny varotra ho orinasa mpamokatra.
Tamin'ny volana aprily 2013
Ny trano famokarana vaovao iray hafa dia nanomboka nampiasaina.
Avelao ho azo antoka kokoa izao tontolo izao.
Hamaha ny olan'ny fiarovana nentim-paharazana miaraka amin'ny teknolojia tsy nentin-drazana.
Filaminam-bahoaka sy fiarovana ny famokarana.